WAXA AAD U BAAHAN TAHAY INAAD KA OGAATO TURJUBAANKA TURKIGA EE UZBEKISTAN - BEERAHA DIGAAGA
Turkiga had iyo jeer waa mid aad u caan ah dadkana jecel ma aha oo kaliya dhadhanka laakiin tayada cuntada ee hilibka.
Ka dib oo dhan, turki digaaga ah oo leh digaag ayaa lagula talinayaa dadka doonaya inay ku dhajiyaan cunto caafimaad leh ama miisaan lumaan.
Mid ka mid ah sababaha naas-nuujinta firfircoon ee turkiga iyo turkiga ee qoysaska waa in aysan keenin dhibaato badan.
Haddii aad haysato digaag, markaa si fudud ayaad ula qabsan kartaa turkiga. Markay iibiyaan hilibka, kharashyada ilaalinta shimbiraha waxaa lagu celin doonaa faa'iido badan.
Waxaa ka mid ah dhammaan noocyada shimbirkan, jilitaanka Palevy Uzbekka ayaa si gaar ah caan u ah. Maxay tahay sababaha danta noocan ah ee shimbirkan. Jawaab faahfaahsan su'aashan ayaa lagu bixiyey maqaalkan.
Uzbekistan waa meesha uu ku dhashay ee turkey huruud ah. Waxaa la gooyey gacmaha dhirta caanaha ee caanka ah N. Zolotukhin, oo, iyada oo loo marayo xulasho taxadar leh oo ah noocyada maxaliga ah, waxay siisay nolosha turkiga.
Shimbirahaasi waxay awoodaan inay si fiican u dareemaan xaaladaha cimilada ee Aasiya. Sababtan awgeed, turkiga caleenta caleenta ah waxaa laga heli karaa inta badan maxkamadaha dhaqaalaha ee Uzbekistan, turkiga iyo waqooyiga Caucasus.
Tani waxay ka mid tahay nooca celceliska turkiga.
Dhanka kale, way qurux yihiin sababtoo ah pollination ah, waa mid guduudan-brown ee shimbiraha - caleen.
Shimbirahaasi waxay leeyihiin jidh dhexdhexaad ah, laakiin sababtoo ah baaluq, waxay u muuqataa mid muuqata, taas oo siinaysa xayawaankan. Madaxa waa yar yahay, halkii celcelis ahaan qiyaas ahaan, iyo dhinaca kale waxay u muuqataa xitaa cidhiidhi. Qoorta waa dheer, dheer, lugaha waa dhexdhexaad.
Natiijada, shimbiruhu waxay u muuqdaan kuwo aad u soo jiidasho leh oo qurxin kara deyr kasta oo ay ku socdaan. Asal ahaan, noocyada this turkiga waxaa loo isticmaalaa si macquul ah ujeedooyin madaxtooyada, ma jiraan wax badan oo ka mid ah sida ay u muuqdaan.
Sidoo kale, shimbirahaasi waxay ka gudbaan noocyo kale si ay u helaan boogaha. Haddii aad go'aansato inaad kala-duwanaato deyrkaaga dhaqaalaha, markaa waa caanaha khatarta ah ee noqonaya ilaahyo aad adigu leedahay.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan sifooyinka ah ee taranka turkey.
Sida faa'idooyinka iyo khasaarooyinka, waxaa loo qaybiyaa sinnaan siman.
Shimbirahaasi waxay miisaan ku filan yihiin, laakiin jajabkani wuxuu lumiyaa indices oo ah noocyo cad iyo cadaan ah. Turkigu wuxuu dhalin karaa 10 kg, iyo turkey - ilaa 6 kg.
Dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 15 illaa 16 toddobaad ee miisaankoodu yahay 4 kg. Noocan ah Shimbiraha yaryar lama dili karoSidaa daraadeed waa lagama maarmaan in la daadiyo da'da qaan gaadhka ah.
Halkan dhibaatadu waxay timaadaa waqtigii, sida shimbiraha caanahan oo si tartiib ah u koraan, markaa waa inaad dulqaadataa oo sugto.
Daryeelka loogu talagalay dhalinyarada ilmo yar ayaa ah midka ugu caansan.
Heerka wax soo saarka ukunta ma aha mid aad u sarreeya - muddada wareegga hal mar, wax ka badan 65 ukumood ayaa laga heli karaa, oo ka mid ah 68% oo keliya ayaa la bacrimiyey waxayna ku haboon yihiin in lagu dul mariyo poults turkey. Laakiin tani waxaa lagu gartaa sicirka badbaadada aad u sarreeya, sidaas darteed badi chicks ayaa ku noolaan doona oo gaari doona qaan-gaaraya, dayactirkooduna ma qaadan doono kharash aad u badan iyo dhibaato.
Tayada hilibka ee shimbirkan waa mid ku qanacsan, dhadhanka ayaa wanaagsan. Guryaha cuntooyinka ee turkiga waa kuwo wanaagsan, sidaa darteed miisaaniyad xadidan waxaad ka iibsan kartaa hilibkan gaarka ah, laakiin waxay doorbidi kartaa qoysaska.
Daryeelka turkiga waa inay ahaataa mid la mid ah inta hartay shimbiraha. Waxay xitaa u duuli karaan saqafka guryaha ama geed. Sidaa darteed, si xor ah oo lacag la'aan ah, waxay u baahan yihiin inay u qoondeeyaan aagga hoostiisa hoostiisa.
Haddii aad go'aansato inaad ilaaliso dhul beereedka ah si aad u socoto turkiga xagaaga, waxaad ku badbaadin kartaa lacag aad u badan oo cunto ah.
Inta lagu jiro maalinta, shimbiruhu waxay cuni doonaan cayayaan badan iyo cunto kale, sidaa darteed baahida cunto badan ayaa la dhimayaa.
Sida ku saabsan content jiilaalka, turkiga waa inay ahaadaan diiran oo qalalan.
Waa in aynaan u oggolaan qorshaha guriga, haddii kale shimbiruhu way jiran yihiin.
Straw, peat ama qumbaha foornada waxaa loo isticmaali karaa sida dhulka loogu tala galay noocan. Xilliga jiilaalka, turkiga waxay u baahan yihiin in ay ku daraan granules gaar ah, taas oo ah isku dar ah vitamiin iyo macdan.
Qodobadani waxay hagaajin doonaan xaaladaha guud ee shimbiraha, iyo sidoo kale inay ku caawiyaan si deg deg ah u qaboojiya qabowga. Guud ahaan, cuntooyinka turkiga waa inay ka kooban yihiin laba nooc oo quudin ah: dareere iyo adag.
Labada noocba waxay ka kooban yihiin badar, laakiin badarka ayaa ku jira xaalad ka duwan.
Xayawaanka caleenta leh waxay u baahan yihiin in la siiyo biyo badan, iyo in la geliyo guriga waa inay ku jiraan baaldi, haddii kale shimbiraha si fudud ayay u soo shubaan weelasha dabacsan.
U hubso inaad ilaaliso caafimaadka shimbiraha. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad kormeerto xaaladda guriga kaas oo turkiga iyo turkiga ku nool yihiin khatarta.
Inay "dilaan" dhammaan noocyada infakshanka iyo fayruusyada qolka, waa in si taxadar leh loo fiiriyo ku nadiifin kloroform ama chlorophos. Xeryahanadaan waxay gacan ka geystaan ​​nadiifinta dhammaan daaqadaha guriga daaqada ah ee bakteeriyo iyo fayrasku ku noolaan karaan.
Haddii aad leedahay waayo-aragnimo yar oo ka mid ah turkiga taranka, ka dibna waxaad bilaabi kartaa xirfaddan adiga oo leh ilmo. Isku day dhamaan faahfaahinta taranka iyo haynta shimbirahan, sidaas darteed marka dambe, marka aad iibsato turkiga dhirta qaaliga ah iyo kuwa farsamada, ma sameyn doonno qalad fudud oo keeni kara dhimashada dhallinyarada. Nasiib wacan.